Yintoni izizathu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
La ukugwetyelwa kwi uyilo kunye ubeko ijolise kwizinto ezintathu: izithuba phakathi kwamagama, Las izahlulo kunye izithuba phakathi koonobumba. Ukusetyenziswa kwayo kunye nokusasazwa ngokugqibeleleyo kwisithuba kuya kunika imbonakalo efanelekileyo kuthi i tekisi.
- Isithuba phakathi kwamagama: kufuneka ugcine i indawo efanelekileyo nehlala ihleli phakathi kwamagama, kodwa uhlala ucinga nge thoba.
Ukunyusa indawo esinayo ufake okwahlukileyo amagama Kuyacetyiswa ukuba ulandele ezi paramitha zilandelayo, usazi ukuba isikali esithe tyaba siyenyuka, ukuba kusetyenziswe iifonti eyandisiweyo, kunye nemilinganiselo emikhulu yomgca.
Ukuba into esiyifunayo kukuyicutha singayisebenzisa iintsapho zefonti kufinyeziwe, nciphisa isikali esithe tyaba okanye ngemilinganiselo emincinci yomgca.
- Izahlulo: Sisitshixo se ukugwetyelwa, kodwa kufuneka silandele imigaqo ethile xa siyisebenzisa. Kufuneka zenziwe ngokuchanekileyo ngokubhekisele kwimigaqo yopelo kulwimi ngalunye, akufuneki sishiye ngaphantsi kwesithathu iileta phambi nganye Iskripthi, akufuneki wahlule amagama Idityaniswe neskripthi esomeleleyo, soze yaphule amagama kwimixholo ephambili okanye kwimibhalo engezantsi, akufuneki sibe nemigca emibini ngokulandelelana kunye nedash.
- Isithuba phakathi koonobumba: Ikwabizwa ngokuba ukuvuma, kwaye kufuneka isetyenziswe kancinci kwaye uyiphephe kangangoko kunokwenzeka. Inkqubo ye- indawo yokuchwetheza ziyilelwe nge izithuba zomgca ifundwe kakuhle ezimisele ukuba ukuba siyayiguqula iya kuba utshintsho lwe typographic ibalulekile. Kodwa ukuba asinakukhetha ngaphandle kokuyitshintsha, kufuneka sazi ukuba iya kuchaphazela indawo phakathi kwamagama kwaye oku kuya kufuneka kwahlulwe kwaye kulungelelaniswe neempawu ezintsha.
imifanekiso: isiGrike urn
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Yintoni ukugwetyelwa
«- Isithuba phakathi koonobumba: Sikwabizwa ngokuba sisikhokelo, kwaye kufuneka singasetyenziswa kancinci kwaye sikuphephe kangangoko kunokwenzeka.»
Ukwahlula-hlula komgca asiyo sithuba phakathi kwesiseko semigca emibini elandelelana?
Ndicinga ukuba into ekubhekiswa kuyo njengokukhokelela kunokuba kukulandela / ukulandelela.
Ndingumfundi weGraphic kunye noMhleli woYilo, ke ndiyabhideka.
Unyanisile, uxolo. Kwakuyimpazamo ngexesha lokubhalwa, bendifuna ukuthi kerning kwaye ndingakhokeli, okwangoku ndiyayitshintsha kungabikho kuphazamiseka. Enkosi ngokuqaphela. Konke okugqibelele. Pandora